Cayaaro | Radio Himilo
Home / Cayaaro
Ahmed Haaddi Today at 7:29 am
Himilo – Weeraryahankii Kooxda Real Madrid Gareth Bale, ayaa iska xaadiriyay waddanka Mareykanka kaddib markii uu isaga tagay kooxda lagu naaneyso cad cadka ee sanadkan ku guuleysatay Champions League iyo Laliga Spain. Bale ayaa muddo dhowr sano ah oo uu ...
Ahmed Haaddi Yesterday at 7:03 am
Himilo – Weeraryahanka Kooxda RCD Espanyol ee dalka Spain Nadya Karpova, ayaa ku catowday in dagaalka Ukraine uu saameeyay mustaqbalkeeda iyo dhamaan mustaqbalka Ciyaartoyda kala duwan ee waddanka Ruushka. Waxaa ay sheegtay in dadka waddanka Ruushka ay u oggolaadeen in ...
Ahmed Haaddi 2 days ago
Himilo – Tababaraha cusub ee Kooxda Man United ayaa waxaa uu amray shaqaalaha Xerada Tababarka Man United ee Carrington ee Cawska la jaro lana gaarsiio 15mm si uu baaska ciyaartooyda u fududaado. Erik; ayaa ballan qaaday in Man United uu ...
Himilo – Weeraryahanka Reer Masar iyo Kooxda Liverpool ayaa shaaciyay in ay suuragaltahay in uu maro waddadii Mane kaddib markii ay kooxda isku fahmi waayeen heshiis cusub oo uu dalbaday. Saalax iyo Liverpool ayaa isku mari la’ dalabka mushaarkiisa todobaadlaha ...
Himilo – Hoggaanka Ururka ay ku mideysanyihiin Taageerayaasha Kooxda Inter Milan ee Waddanka Talyaaniga ayaa ku wargeliyay taageerayaasha in aysan soo dhaweyn u sameyn Lukaku oo kooxda dib ugu laabanaya. Weeraryahanka ka soo jeeda Bilgiumka ayaa lagu eedeeyay in xagaagii ...
Himilo – Daafaca FC Emmen, Jeff Hardeveld ayaa xiriir jacayl la yeeshay garsoore Shona Shukrula oo u dhalatay dalka Holland. Todobaadkan ayey xiriirkooda jacayl ku shaaciyeen baraha bulshada. Xiriirka jacayl ayaa ka billowday markii daafaca uu kaarka casaanka ah qaatay ...
Gaarigii Ronaldo ee joogay $2M oo doolar oo shil ku burburay
Ahmed Haaddi 7 days ago
Himilo – Gaari uu lahaa Cristiano Ronaldo ayaa waxaa uu shil ku galay Sa Coma ee dalka Spain halkaas oo isaga, saaxiibtiis iyo 5 Carruur ah oo uu dhalay ay dalxiis u joogaan. Gaariga ka burburay Ronaldo ayaa waxaa uu ...
Guddoomiyihii Chelsea oo 19 sano kaddib is casilaya
Ahmed Haaddi 8 days ago
Kooxda Kubadda Cagta Chelsea ee Dalka Ingiriiska ayaa shaacisay in Guddoomiyihii guud ee Kooxda Bruce Buck kaas oo muddo 19 sano ahaa maanulayay kooxda. 76 jirkan ayaa sababta uu isku casilayo lagu sheegay in Dowladda UK ay dalbatay in qofkasta ...
Ahmed Haaddi 9 days ago
Himilo – Bisha November ee sanadkan waxaa dalka Qadar ka furmaya Koobka kubadda Cagta Adduunka oo horay loo sii shaaciyay isku aadkiisa. Waxaa ka soo baxay group-yo ay ku jiraan kulamo nxiiso badan oo qofkasta oo daneeya ciyaaraha ay tahay ...
Magaalooyinka martigelinaya Koobka kubadda Cagta Adduunka ee 2026
Himilo – Xiriirka kubadda Cagta Adduunka ee FIFA ayaa shaaciyay dalka marti gelinaya Koobka Kubadda Cagta Adduunka ee sanadka 2026ka iyo Magaalooyinka uu ka qabsoomayo. Xiriirka FIFA ayaa isku raacay in Magaalooyinka Newyork iyo Newjersey ee dalka Mareykanka noqdaan labada ...